Faalooyinka | Mustaqbal Radio
Home - Faalooyinka
Corcoran: “17; Sano Bare ayaan ahaa,wax ma aqrin karin,mana qori karin”
John Corcoran ; waxaa uu ku koray Gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka, intii u dhaxeysay 1940 ilaa 1950kii waxaa uu ka mid ahaa, lix carruur ah oo ilmo adeer ahaa,waxaa uu ka qalin jebiyay Dugsi sare,waxaana uu ku biiray Jaamacad. 1960kii waxaa uu noqday Bare,waxaana uu waday muddo 17 Sano ah, hayeeshee waxba ma aqrin karin,waxna ma qori karin,waxaa ...
Sidee u noolyihiin Haween Soomaali ah oo darbi jiif ku ah Jakaarta?,Sawirro.
Magaalada Jakaarta ee Caasimadda Dalka Indonesia waxaa ku sugan qaxooti ka badan 13,000 oo qof oo intooda badan ay diidday dowladda sidoo kalena hay’adaha Qaxootiga ay u diideen kaararka qaxootinimo. Dadkaas waxaa ka mid ah Haween Somaaliyeed oo aad u tiro badan,waxaa ay darbi jiif ku yihiin Waddooyinka Magaalada Jakaarta,waxaa ay ku jiraan nolol aad u adag,ma heystaan cunto,cabid,Hooy iyo ...
Maxamed Bin Salmaan: Wahaabiyada waxa aan u faafinay dalab nooga yimid reer galbeed awgi!
Dhaxal-sugaha boqortooyada Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan ayaa daboolka ka qaaday in ku faafidda aragtida Wahaabiyada ee gudaha boqortooyada Sucuudigu iyo caalamka Islaamkaba guud ahaan uu ka soo billowday xilligii uu socday dagaalkii qaboobaa, kaddib markii dowlado gacan-saar la leh Sucuudigu ay ka codsadeen boqortooyada in ay dhaqaale ku bixiso sidii isfidinta midowgii Soofiyeet ee Ruushku horkacayey looga hor istaagi lahaa ...
Julian Assange: “Mareykanka iyo Sucuudiga ayaa sameeyay ISIS iyo Al-Qaacida”.
Aas aasaha Shabakadda Siraha faafisa ee WikiLeaks,Ninka lagu magacaabo Julian Assange,ayaa waxaa uu soo bandhigay warbixin ka kooban 500,000 oo ah siro uu ka hayo diblomaasiyadda iyo sirdoonka Mareykanka. Warbixinta uu hadda siidaayay Julian waxaa ay sheegeysaa in Mareykanka iyo Sucuudiga ay aas aaseen Ururka Daalibaan ee ilaa hadda ka dagaallama Dalka Afghanistaan islamarkaana ujeedada laga lahaa ay ahayd in ...
Maxaa la gudboon Guddiga Sare ee Fursad Fund?
Dadweynaha isticmaala baraha bulshada ayaa todobaadkan si weyn ula falgalay doodda ku saabsan sanadguuradii labaad ee Aasaaska Mashruuca Fursad Fund oo ay uga hadleen siyaabo kala duwan dadweynaha qaar ayaa aad uga xumaa in saaxadda laga waayo Mashruucii sida weyn loogu han weynaa ee Fursad Fund kaas oo ay hormuud ka ahaayeen dhalinyaro mutadawiciin ah, halka kuwo kale ay ku ...
Xukuumadda RW Kheyre maka go’antahay La-dagaalanka Musuqmaasuqa
Soomaaliya ayaa kaalinta ugu hooseysa ka gashay dalalka adduunka marka laga eego dhinaca Musuqmaasuqa iyada oo sanad weliba ay hoos ugu sii dhacaysay liiska dalalka ugu musuqa badan dunidda ilaa ay gashay halka ugu hooseeyo 12kii sano ee la soo dhaafey Hay’adda Transparency International oo ah hay’ad aan dowli ahayn oo cilmi baaris ku samaysa arrimaha la xiriira musuqmaasuqa iyo ...
Boqortooyada Sucuudi Carabiya waxaa ay hadda ku jirtaa isbeddel dar-dark u socda oo Siyaasadda iyo Bulshada ah ah,waxaana boqortooyadda hadda saaran tahay waddada qunyarsocodnimada,waxaana uu dhaxal sugaha doonayaa in uu dunida la hortago Sucuudiga oo ka madaxbanaan xagjirnimada. Waxaa loo arkaa in uu yahay maskaxda ka dambeysa isbeddelka dhinaca istiraatiijayadda ah ee hadda ka socda Sucuudiga,kaas oo lagu lagu jiheynayo ...
Gabar u dhalatay Ghana oo Taliye ka ah 3,Saldhig Boolis oo ku yaalla Muqdisho
Gladys Duneebon,waa sarkaalad Boolis ah,waxaa ay u dhalatay Dalka Ghana,waxaa Soomaaliya la keenay 8 bilood ka hor,si ay uga mid noqoto Booliska Ghana ee jooga Soomaaliya. Duneebon,waxaa ay ka sheekeyneysaa muddadaas ay joogto Soomaaliya,gaar ahaan Muqdisho,waxaa xirfaddeeda ku kordhay in ay noqoto Wade gawaarida mid ka mid ah kuwa ugu adage e Ciidanka oo ay nadir tahay in ay Haweenka ...
Doorashooyinka Madaxtinimo ee Afrika 2017, Sawirro.
Qaaradda Afrika 2017 waxaa ay marti gelisay 6 doorasho madaxtnimo oo mid ka mid ah kala baxeeda la qabanayo 26ka Bishan December,waa dalka Liberia. Dhamaan shanta doorasho ee kale ee ka dhacay Qaaradda Afrika waxaa la dhaariyay madaxweynayaasha ,inta badan madaxweynayaashaas waxaa ay difaacdeen kuraastooda dib u doorasho ayeyna ku soo laabteen. Halka madaxweyne ee ku guul darreystay in uu ...
Kenya oo qarineysa muwaaddiniin uga dhintay Qaraxii Soobbe.
Warbaahinta dalka Kenya ayaa aad u hadal haya muwaaddiniin Kenyaan ah oo ka shaqeysta gudaha Soomaaliya kuwaas oo qaarkood ku dhintay qaraxii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho. Sida uu qorayo manta Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Dalka Kenya,waxaa jira muwaaddiniin la hubo in ay Kenyaan yihiin oo qaraxa ku dhintay hayeeshee dowladda Kenya ay ku talagal u qarineyso. ...
Imaaraadka oo labo dal ka dhigaya Yemen!, warbixin
27; Sano kaddib Midowgii Yemen ayaa la sheegayaa in hadda mar kale la filayo in Dalka Yemen oo u kala qeybsamo laba dal. Dowladda Imaaraadka oo taageero Maaliyadeed,Ciidan iyo xoog kaleba isugu dartay Qabaa’ilka Koofurta Yemen ayaa la filayaa in ay qaadaan afti ay Yementa koofureed ku noqoneyso Dal ka madaxbanaan Caasimadda Sanca ee Dalka Yemen. Arrintan waxaa la xaqiijiyay ...
Weerarrada Mareykanka ee Somaliya 2001-2016,Q.16aad
March 5 2016kii 150-200 Qof ayaa ku dhimatay weerar Diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyeen bartamaha Soomaaliya meel 170 KM u jirta Muqdisho kuna began Gobolka Hiiraan, Goobta la weeraray waxaa ay ahayd xero ay Ciidanka ku tababartaan Al-shabaab,waa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee uu mareykanka ka fuliyo Soomaaliyua mar kaliya,weerarkii uu Mareykanka fuliyay ee ugu khasaaraha badnaa waxaa uu ahaa ...